Iikhosi zeMephu zeGIS: eyona ilungileyo ikhoyo. -Geofumadas
NgoJanuwari, 2014 ArcGIS-ESRI, Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, qgis, Ezahlukeneyo
ImephuGIS, ngaphandle kokusinika umdla blog, Lugxile nohlobo zoshishino on an online ngoqeqesho ngezihloko kwimeko geospatial.
Ngowama-2013 kuphela, bangaphezulu kwama-225 abafundi abathatha izifundo zabo, inani elibonakala linokuqwalaseleka kum, xa kuthathelwa ingqalelo ukuba iinzame zikhona koosomashishini ababini abaqale oku ngaphezulu konyaka odlulileyo. Ke sisebenzisa ithuba lokuqala kuka-2014 ukukhuthaza inyathelo lakho.
Ikhompyutha ye-Python ye-ArcGIS 10.
Funda ukuba ungazenza njani na iincwadi zesikhokelo ukwenza imisebenzi ye-GIS ihambelane nolwazi lwendawo
Ngale nto ufunda ukusebenzisa ulwimi lwePython ulwimi ngendlela enomdla nenomdla. Le khosi ijolise ArcGIS rhoqo abasebenzisi abafuna ukuya inyathelo eliya phambili, automating imisebenzi zolawulo lolwazi, geoprocessing kunye isizukulwana cartography.
Kule khosi ufunda, inyathelo ngesinyathelo:
Phuhlisa ngokufanelekileyo ulwimi lwePython.
Velisa zeempendulo zakho ukugcina kubo iinkqubo GIS eziye ngaphambili olungenakwenziwa ngazandla.
Impahla, iingxelo kunye nokubonisana kwizinto ze-GIS ziveliswa kalula.
Inyathelo ukusuka kwimisebenzi emincinci ye-GIS ukuya kulawulo lweenkcukacha ezinkulu.
Ulawulo kunye nokuveliswa kweemephu kunye nothotho lwemephu ngaphandle kokuvula iArcGIS.
Inkqubo ye-intanethi yokuphuhlisa ukusetyenziswa kwemephu yewebhu.
Yenza i-geospatial architecture epheleleyo I-OpenGeo Suite
Esi sifundo sijolise kubo bonke abafuna ukufunda indlela yokuphuhlisa usetyenziso lweemephu zewebhu kunye nesoftware evulekile yomthombo, ekungeniseni idatha, ukuyilawula nokuyipapasha ngewebhu lilandela imigangatho ye-OGC.
Yenza uluhlu logcino lwendawo kunye nohlalutyo lomhlaba ngePostGIS.
Layisha kwaye udale iinkonzo zedatha yendawo nge GeoServer.
Qulunqa iimaphu uze udale izitayela kwiwebhu nge GeoExplorer.
Yenza indawo yokugcina imifanekiso yemephu neGeoWebCache.
Yenza izicelo zeemephu zewebhu ezizimeleyo nge-OpenLayers neLeaflet.
Yenza kwaye sebenzisa iifayile geoJSON ukugcina ngezakhiwo kunye kwenza yakho yonke lula.
Inkqubo ye-Intanethi ye-GIS Expert: i-ArcGIS, i-gvSIG ne-QGIS.
Funda ngendlela yokulawula abathengi be-GIS abathathu abadumileyo nababalulekileyo kwimarike yomsebenzi kwihlabathi liphela.
It is a ikhosi epheleleyo apho ufunda emsebenzini kunye yeraster kunye esiyua yolwazi lwejiyografi, iingqikelelo, imithetho topological, ukuhlela, ukudala symbology bokulebhelisha, imephu ukwakhiwa yokushicilela upapasho intanethi, geoprocessing izixhobo ezifana Model Umakhi e I-ArcGIS, SEXTANTE kwi-gvSIG okanye GRASS kwi-QGIS, njl.
Yazi i-interface ye-ArcGIS, i-gvSIG ne-QGIS.
Sebenza ngeendlela kunye neenkonzo zangaphandle.
Hlela idatha yendawo
Sebenza kunye nokulungelelanisa iinkqubo kunye nemifanekiso georeference yeraster.
Yenza isymboli kunye neelebheli.
Yenza iziqulatho zemephu.
Yenza geodatabases kunye yethopholoji efanayo.
Yenza uhlalutyo lomhlaba.
Sebenza nge SEXTANTE.
Shicilela imephu kwi-intanethi
Inkqubo ye-Intanethi yeziseko zedatha: i-PostGIS.
Qala ukulawula i-PostGIS yolwazi oluvulekile lwendawo yolwazi lwendawo.
Kule khosi iimfuno ziyahlangatyezwa ngolu hlobo: Ungangenisa njani iifayile zesiseko sedatha? Ungasikhawulezisa njani isantya sokuphendula xa usenza imibuzo? ukuba uhlalutyo lomhlaba lwenziwa njani? Kutheni kukho uhlobo lwejometri nohlobo lwejografi? Uyibona njani ukuba yeyiphi idatha ekwi-PostGIS?
Ukongeza, uya kufunda methodologically, inyathelo ngenyathelo;
Uyifaka njani i-PostgreSQL + PostGIS
Uyenza njani i-database kwaye uyinike indawo yendawo
Indlela ukulayisha iinkcukacha ezingomhlaba
Uyijonga njani kwaye uyifumana njani idatha egcinwe kwi-PostGIS
Zeziphi iintlobo zejometri ezikhoyo
Ndilwenza njani uhlahlelo lwendawo kunye nemisebenzi ekhoyo yendawo
Uyikhawulezisa njani imibuzo
Ungasebenza njani ngedatha ye-raster
Njani umsebenzi kunye data OpenStreetMap
Inkqubo ye-ArcGIS online.
Funda ukuba ungaphatha njani umxhasi we-GIS osetyenziswa ngokubanzi kunye nowafunwa kwimarike yomsebenzi kwihlabathi liphela.
Le yikhosi epheleleyo apho uya kufunda ukusebenza kunye ne-raster kunye ne-vector yolwazi lwejografi, ukuhlela, umfuziselo kunye neelebheli, iingqekembezo, i-georeferencing, i-geoprocessing, ukudalwa kwee-geodatabases kunye ne-topology, ukwakhiwa kweemephu zokuprinta kunye nokupapashwa kwababukeli bewebhu kunye ArcGIS online.
Uhlela njani idatha yendawo
Usebenza njani ngeetafile
Ungasebenza njani kunye neesistim zokulungelelanisa
Indlela georeference imifanekiso eyi
Uziqhuba njani izixhobo ze-ArcToolbox
Ukwenza njani uhlalutyo kunye neModeli yokwakha
Uyenza njani imifuziselo kunye neelebheli
Indlela ukwenza uhlalutyo yeraster ne Spatial uMhlalutyi
Indlela ukudala geodatabases
Uyakha njani imithetho yendalo
Ungayipapasha njani imephu kwi-ArcGIS ekwi-Intanethi
Inkqubo ye-QGIS kwi-intanethi.
Funda ngendlela yokusebenzisa eyona nkqubo inamandla neyimfuneko ye-GIS evulekileyo kwimarike yabasebenzi kwihlabathi liphela.
Le yikhosi epheleleyo apho uya kufunda ukusebenza kunye ne-raster kunye ne-veologist yolwazi lwendawo, uqikelelo, ukuhlela, isimboli kunye neelebheli, ukwakhiwa kweemephu zokuprinta, i-geoprocessing, i-GRASS, ukupapashwa kwi-intanethi, njl.
QGIS interface. Intshayelelo yokulungelelanisa iinkqubo.
Iimpawu kunye neelebheli.
Ukudaleka kolwazi kunye nokuhlela nezingqengqelo.
Umdibaniso weGRass kwiQGIS.
IsiZukulwana esiZuziweyo iimephu zokushicilela nokupapasha intanethi.
Ukudityaniswa koovimba bendawo: PostGIS.
Iikhosi zisebenza kunye neGumbi lokufundela elililo, ukuze zithathwe nangaliphi na ixesha kunye nokufikelela kwiiyure ezingama-24. Kwaye siyayifumana inomdla kwindlela abayisebenzisa ngayo ibhlog kunye noluhlu lwabo lokuposa njengomboniso womgangatho wezifundo zabo.
Ukuze ufunde kabanzi,
Yiya kwiiMephu zeGIS izifundo
Post edlulileyo«Ngaphambilini Njani imephu lehlabathi 1922
Post Next IBlogPad-Umhleli weWordPress kwi-iPadOkulandelayo »
2 Iimpendulo "kwiiKhosi zeMephu yeGIS: eyona ilungileyo ikhona."
Kuyimbeko yokuba ubhale inqaku elipheleleyo kunye nekhosi zethu. Siyabonga kakhulu. ABANTU BAMANANI!